[Ciidamada Kiiniya Iyo Kuwa Soomalida Oo uu Dagaal Dhexmaray Iyo Sababta Keentay]
Friday January 12, 2018 - 13:50:19 in Wararka by
Muqdisho(CYN)Wararka ka imaanaya degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal uu dhex maray Ciidamo Kenyan ah iyo ciidamo ka tirsan dowladda
Soomaaliya, kaddib markii ay kala shakiyeen.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan wajiga u duubnaa ay ku hubeysnaayeen saddex ka mid ah gaadiidka dagaalka, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in gaadhigooda uu ka babanayay calanka Al-Shabaab.
Ciidamada Dowladda ayaa muujiay shaki ku aadan in Ciidankan ay yihiin Al-Shabaab, waxayna u yeedhteen askarta kale oo xiligaas guryohooda ku maqnaa iyagoo soo buux dhaafiyay halka laga baxo Magaalada, si ay isaga caabiyaan Ciidankan hadey yihiin Shabaab.
Ciidamada Kenya oo iyaga dhankooda qabay cabsi ku aadan iney dhexda ugalaan Shabaab ayaa markii ay arkeen Ciidanka Dowladda oo wada u fadhiya rasaas ooda ugaqaaday waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo geystay Khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Lama oga khasaaraha soo gaadhay ciidamada Kenyanka, waxaana xaalada degmada Ceelwaaq ay ku soo laabatay mid caadi ah, inkastoo dadka deegaanka ay hadal hayaan kala shakiga ciidamada oo midba midka kale uu u maleynayay Al-Shbaaab .